Hamro Online NewsNepal's Leading News Portal | कमरेड धावा लामा ‘विश्व’ प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली - Hamro Online News
कमरेड धावा लामा ‘विश्व’ प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली
शनिबार, जेष्ठ १७, २०७७ | onlinenews
नेत्र मोक्तान ‘सचेत’
महान् नेपाली जनयुद्धमा जीवन बलिदान गर्ने शहीदहरुको लाममा विर्सनै नसकिने एक नाम हो क.धावा लामा ‘विश्व’ । रामेछापको बेथान गाउँ हालको सुनापति गाउँपालिका वडा नं. ४ मा जन्मनु भएका कमरेड विश्व नेपालको जनयुद्धमा रामेछापले भूल्नै नसकिने एक चिरपरिचत नाम हो । उहाँ जनयुद्धमा रामेछापको एक संस्थापक नेता पनि हुनुहुन्थ्यो । क. धवा लामा ‘विश्व’ सँग मेरो चिनजात वि.स. २०५४ साल तिरबाट भएको हो । त्यसपछि उहाँसँग लगातारजस्तै भेट भइरहन्थ्यो । २०५८ सालबाट म पार्टीमा पूर्णकालिन भएपछि भने हाम्रो भेट जिल्ला तहको केन्द्रीत कार्यक्रमहरुमा मात्र हुन्थ्यो । म जिल्लाको पूर्वि वेल्टमा र उहाँ जिल्लाको पश्चिमी वेल्टमा पार्टीको जिम्मेवारीमा रहनुभयो ।
२०६० साल श्रावण ३२ गते दोरम्बा हत्याकाण्डपछि रिक्त जिल्ला जनसरकार प्रमुखको जिम्मेवारीमा क. धावा लामा ‘विश्व’लाई सोही वर्षको मंसिरमा आयोजीत जिल्ला भेलाले चयन ग¥यो । त्यसपछि क. धावा लामा ‘विश्व’ जिल्लाको मूल तहको नेतृत्वको टिममा रहेर पार्टीलाई राजनीतिक र सांगठानिक दुवै रुपमा अगाडि बढाउन जिल्लाभरी क्रियाशील रहनुभयो । पार्टीलाई सुदृढ गर्न र जनसरकारको कामलाई ब्यापक विस्तार गर्न उहाँ अहोरात्र जुट्नु भयो । यसैक्रममा म पनि उहाँसँग काभ्रेको कोसीपारी क्षेत्रमा पार्टी काममा जोडिन पुगे । सायद २०६२ सालको चैत्रको तेश्रो हप्ताबाट हामी कोसीपारी क्षेत्रमा एक राजनीतिक अभियान सञ्चालनमा जुट्यौं । दोलालघाट, भुम्लुटार, रिष्ठे सापिङ्ग, सिमथली, भूम्लु सल्ले र चौवासमा हामीले हाम्रो कार्यक्रमलाई केन्द्रीत ग¥यौं । पार्टीको जनआधार कम्जोर रहेको त्यस एरियालाई राजनीतिक रुपमा संगठीत गर्ने लक्ष्य हाम्रो कार्यक्रमको थियो । यसैका लागि हामीले कार्यक्रमहरुलाई केन्द्रीत गरि अघि बढायौं । विभिन्न राजनीतिक सभा, अन्तरक्रिया कार्यक्रम, जनसेवाका कार्यक्रमहरु ग¥यौं । यसरी कार्यक्रम गरिरहँदा हाम्रो गतिविधिहरु खुल्लमखुल्ला नै थियो । कतै यो खालको खुल्ला गतिविधिले हाम्रो सुरक्षामा खतरा निम्तीन सक्ने कुरातर्फ पनि हाम्रोबीचमा छलफल चलिरहन्थ्यो । हामीले हाम्रो सुरक्षाका लागि पच्चोरघाट र दोलालघाट दुवै नाकाहरुमा एम्बुस टोली राखेका थियौं । तर ती एम्बुसहरुले दिउसोमात्रै ड्यूटि गरिरहँदा कतै दुश्मन राति छिर्नसक्ने खतरा थियो । तर पनि दुश्मन कोसीपारी क्षेत्रमा प्रवेश नगरेको धेरै भएको थियो । यसरी हामी त्यस क्षेत्रमा करिब एक महिना लामो अभियानमा रहयौं । यहाँ रहँदै गर्दा जिल्ला एचक्यू (हेडक्वाटर) बाट हामी केही साथीहरुलाई बोलाइएको सूचना प्राप्त भयो र हामी एचक्यूको सम्पर्कमा रामेछापको दर्गामा पुग्यौ । त्यहाँ क. ललितसँग भेट भएपछि हामी दोलखाको विगु भेलामा लाग्यौ । त्यहाँ ५ दिन लामो भेला तथा प्रशिक्षण गरि जिल्ला फर्किदै गर्दा २०६२ सला जेठ १९ गते बिहान दोलखाको मैनापोखरी आइपुग्दा रेडियो नेपालबाट क. धावा लामा ‘विश्व’को सहादतको खबर सुन्यौं । सुरुमा पत्याउनै गाह्रो भयो । हामी सबैको हातखुट्टा खत्रक्खुत्रुक्क गल्यो । आन्तरिक सञ्चारबाट घटना यथार्थ रहेको जानकारी पनि प्राप्त भयो । क. पुष्प लगायतका कमरेडहरुको सहादतले छियाछिया हामीहरुलाई फेरि क. धावा लामा ‘विश्व’को सहादतले घायल बनायो । क. धावा लामा, ‘विश्व’, क. सञ्जीव लामा र क. रामशरणको आन्तरिक दुर्घटनामा परि सहादत भएको स्थान सिमथली पुगेर फर्किने क्रममा चौवास बजार नजिकैको जंगलमा बसमा खान्तलासी गरि सेनाले पक्राउ गरि हत्या गरेको रहेछ । यसरी क. धावा लामा ‘विश्व’लाई हामी बीचबाट दुश्मनले २०६२ साल जेठ १८ गते दिउसो ४ बजे सदाका लागि चुडिलग्यो । क. धावा लामा ‘विश्व’सँग पछिल्ला दिनहरुमा जिल्ला कमिटीको काम, बैठकहरुमा भाग लिने अवसर मिलेको थियो । ती बैठकहरुमा पार्टीलाई माथि उठाउन वैचारिक र राजनीतिक रुपमा पार्टी कमिटीभित्र अन्तरविरोधहरुलाई सञ्चालन गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन उहाँले अत्यन्तै मेहनत गर्नुहुन्थ्यो । सबैलाई अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै लैजाने क्षमताको विकास भइरहेको थियो । यसले उहाँबाट असल नेतृत्व पाउने आशा हामीले लिएका थियौं । तर ती आशालाई दुश्मनले अपुरो बनाइदियो । हाम्रो सामु कहिल्यै पनि नफर्कने गरि दुश्मनले उहाँलाई हत्या ग¥यो । जुन दिन हामी दोलखा जानका लागि चौरीदेउरालीबाट छुटेका थियौं, त्यही भेट नै हाम्रो अन्तिम भेट भयो, क. विश्वसँग ।
मैले उहाँलाई भनेको थिएँ । यहाँ चलायमान किसिमले गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ । एक दुई दिन गतिविधि गर्ने र फेरि विकेन्द्रीत हुने । नेतृत्वको सुरक्षामा अलि दुश्साहस गर्नाले उहाँको सुरक्षा हुन सकेन । चौरी एरियामा रहनुहुने साथीहरुले पहिल्यै सूचना पाएको भन्ने पनि थियो । तर सञ्चारको चुस्तता नहुँनाले नेतृत्वलाई जोगाउन नसकिएको जिल्लाको निष्कर्ष थियो । हामी विगु लाग्दा क. धावा लामा ‘विश्व’लाई जिल्लाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी, सम्पूर्ण कार्यभार सुम्पिएर जानु भएको थियो क.ललितले । त्यसदिन क. धावा लामा ‘विश्व’ सिमथली दुर्घटना स्थल पुगेर क. सञ्जीव र रामशरणको शरीरलाई श्रद्धाञ्जली दिएर फर्किनु भएको थियो । क. धावा लामा ‘विश्व’ले रामेछापको जनयुद्धको प्रक्रियामा सुरुवातिका दिनदेखि नै पूर्णकालिन भएर काम गर्नुभयो । रामेछाप बेथानको एक सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएर मुलुकको परिवर्तनका निम्ती आफ्ना निजी जिन्दगी त्याग्दै मुक्ति अभियानमा लामबद्ध क. धावा लामा ‘विश्व’ले पार्टी एरियादेखि जिल्ला तहसम्मको नेतृत्व विकास गरिरहनु भएको थियो । जनयुद्धका क्रममा पार्टी भूलोगदेखि सैन्य फर्मेशनसम्म काम गर्नुभएको थियो । राजनीतिक र फौजी दुवै ज्ञानले भरिपूर्ण कमरेड विश्व एक परिपक्व नेतृत्वको रुपमा हुनुहुन्थ्यो । कहिले उहाँले वैधानिक किसान मोर्चाको समेत नेतृत्व गर्नुभयो भने जनयुद्धको सुरुवाती मोर्चा ऐतिहारिक बेथान मोर्चामा पनि सहभागि हुनुभएको थियो । त्यसपछिका पूर्वका सफल मोर्चाहरु काभ्रेसको फलाटे चौकी, काभ्रेकै भिमखोरी चौकी, दोलखाको मेलुङ्ग चौकी र मैनापोखरी चौकी, सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पा चौकी र रामेछापको दोरम्बा लगायतका चौकीहरु आक्रमणमा सहभागि हुनुभएको थियो । यसरी रामेछापको जनयुद्धका एक क्रान्तिकारी नेतृत्वको हत्याले सिंगो रामेछाप शोकाकुल बन्यो । दोरम्बा हत्याकाण्डले टुक्रिएका रामेछापेली जनसमुदायको मुटुलाई फेरि चौबास हत्याकाण्डाले छियाछिया पा¥यो । टुक्रिएका मनहरुलाई सम्हाल्दै महान् शहीदहरुले छोडिगएका बाँकी क्रान्तिको कार्यभार, शोकलाई क्रान्तिमा बदल्दै जनयुद्धको मोर्चामा हामी डटिरहयौं । वीर शहीद क. विश्व तपाइको अधुरा सपनाहरुलाई पूरा गर्न हामी निरन्तर लागिरहेका छौं । आज तपाईको सहादत भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । यहाँसम्म आइपुग्दा देशले नयाँ राजनीतिक मार्गमा प्रवेश गरिसकेको छ । जसमा तपाईको अमूल्य योगदान रहेको कुरा हामी कहिल्यै विर्सन सक्दैनौं । मेरो तपाइसँगका ती राजनीतिक यात्राका पलहरु सँधै सम्झिरहने छु । वीर शहीद क. धावा लामा ‘विश्व’ अमर रहुन् । यहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली ब्यक्त गर्दछु ।
(लेखकः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) रामेछापका नेता हुनुहुन्छ ।)